CIN Khabar संक्रमित अझै धेरै पत्ता लाग्ने छन्, डर नमानौं
संक्रमित अझै धेरै पत्ता लाग्ने छन्, डर नमानौं
डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ शनिबार, चैत २२, २०७६, ०६:५०:००
आज थप ३ जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ । साथै बाहिरबाट आएको व्यक्तिबाट स्थानीयलाई सरेको हुँदा नेपाल कोभिड-१९ को दोस्रो चरणमा पुगेको छ । परीक्षणको दायरा बढाएकोले यो पत्ता लागेको हो । पत्ता लाग्नु राम्रो कुरा हो ।
यो परिणामको कारण परिक्षणको दायरा अझै बढ्नेछ | जति व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण छ, त्यो सबै पत्ता लागेमा रोग नियन्त्रण झनै प्रभावकारी हुनेछ । तसर्थ हामीले चिन्ता लिनु जरुरी छैन ।
हामीसंगै १ व्यक्ति संक्रमित देखिएका पाकिस्तानमा २७०८ जना संक्रमित भएका छन् भने ४१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अफगानिस्तानमा २९९ संक्रमित भएका छन् भने ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । श्रीलंका र नेपालमा लामो समय १ जना संक्रमित भएर ग्रिन जोनमा थिए ।
त्यस्तै माल्दिभ्समा १९ जना संक्रमित छन् । हामीभन्दा थोरै अघिं रहेको भारतमा ३०८२ जना संक्रमित भएका छन् भने ८६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । एकजना अम्रिकन संक्रमित हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण उडान रद्द तथा सिमा बन्द गरेको भुटानमा ५ जना संक्रमित छन् ।
हामी किन डराउने ? किन चिन्तित हुने ? हामी घरभित्र बसेका छौं, हात धोइरहेका छौं, बच्ने तरिका बुझेका छौं भने हामीलाई कोरोना भाइरस सर्दैन। कोरोना हामीलाई खोज्दै घरभित्र आउने हैन । हामी नै खोज्दै भीडमा जाने हो । तसर्थ सतर्क रहौं, डर बिल्कुल नमानौं । अर्को कुरा संक्रमण हुँदैमा मृत्यु हुने पनि होइन । अहिले कोरोना संक्रमणको मृत्युदर २ % पनि छैन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २२, २०७६, ०६:५०:००